Gịnị kpatara aha a? - 1aviagem.com
Aha, a nabatara aha a mgbe m malitere ịwa na youtube. Ọ dị mkpa inwe aha pụrụ iche.
Ọwa (ma ugbu a blog) ga-ekwukwa banyere njem. Ma anaghị m emekarị njem. Ana m eme ihe ọ bụla o kwere mee maka mba ọhụrụ ma ọ bụ maka ebe ọhụrụ. Ya mere ọ bụrụ na ị gbanwee ebe ị na-aga ma gaa ebe dị iche, ọ ga-abụ "njem mbụ gị" n'ebe ahụ.
(Ihe mgbaru ọsọ m bụ inwe ike ịga mba niile nke ụwa, ka m ga-enwe ike?).
Ya mere aha mbu nke biara n'uche bu: primeraviagem.com.
Ma mgbe ahụ, m hụrụ na ọ ga-adị ogologo oge!
N'ihi ya, ekpebiri m imebi ya: njem 1th. Ọ dị ka mkpụmkpụ ma mara mma nke ọma ?! Ọfọn, ọ na-eme na youtube (akwụkwọ akụkọ na ịntanetị na n'ozuzu) anaghị anabata akwụkwọ pụrụ iche dika aha. ya mere enweghi ike ede ya. (I.e.
N'oge ochie, enweghị igodo dị na keyboard. na ime ya ọ dị mkpa iji tinye: 1a. ịgbanwuo 1ª.
Ma mgbe m na-eji 1 eme njem na hashtag, pịnye: # 1a.travel Instagram na Facebook mechara hacking to #1a (emetụ aha njem!). (I.e.
Ihe ngwọta bụ iwepu isi. N'ihi ya, ọ dị ka: "1aviagem"N'akọrọ ọnụ, a na-ebelata ma na-enweghị isi !! Nke ahụ bụ ihe ọ ka na-ejide taa.
Ọ bụ ya mere e ji gbanwee aha ahụ:
1aviagem(na na na na) na na na na na na! (I.e.
Ya mere, ọ bụrụ na gị, dị ka m, bụ onye ọrụ ụgbọ mmiri mbụ, na ebe ndị a nke Intanet, banye n'ụgbọ mmiri, (denye onwe gị) na anyị ga-akọwa ụwa a.
Nabata 1aviagem.com! (I.e.
Ọ bụ nso nso. Anyị ga na-atụgharị, na-emekwa anyị obi ụtọ iji mee ka ọ ghara ịdọpụ eriri ndị ahụ. O wee jụọ gị n'apata ụkwụ na anya dị ka nke a ...
#garfield n'ime ebe obibi ya. Mgbe ị risịrị nri, kpụọ mbọ gị
Lee ka stampụ #Riga a si maa mma na #history ya. Youghọtara na mgbe a na-eji akara a, #Brasil ka a na-achọpụta? Chọrọ ịmatakwu ịnweta 1aviagem.na #1aviagem #templarios # 1500 # XNUMX narị afọ